यी टिप्स जसले हाँस्दा पनि घट्छ तौल ! - Dhangadhi Khabar
आइतबार ०९, माघ २०७८ २३:५५
यी टिप्स जसले हाँस्दा पनि घट्छ तौल !
एजेन्सी- खानपान र जीवनशैलीका कारण मानिसहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन्छ । स्वास्थ्यलाई सन्तुलित राख्न आवश्यक छ । यसका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउने गरिन्छ ।
बुधबार ३१, भदौ २०७७ १०:११ मा प्रकाशित
#खानपान #जीवनशैली #स्वास्थ्य #मोटोपन